छुट्टै प्रदेश बनाएर भएपनि दाङलाई राजधानी बनाउने : महरा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
छुट्टै प्रदेश बनाएर भएपनि दाङलाई राजधानी बनाउने : महरा
उपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले दाङ छुट्टै प्रदेश भएर पनि राजधानी बन्नसक्ने बताएका छन् ।
उनले यही संरचनामा नै दाङलाई ५ नं.प्रदेशको राजधानी बनाउने पहिलो प्राथमिकता भएको र त्यसो हुननसके छुट्टै प्रदेश बनाएर पनि राजधानी बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले दाङ छुट्टै प्रदेश भएर पनि राजधानी बन्नसक्ने बताएका छन्। शनिबार विहान घोराहीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महराले यही संरचनामा नै दाङलाई ५ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउने पहिलो प्राथमिकता भएको र त्यसो हुननसके छुट्टै प्रदेश बनाएर पनि राजधानी बन्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए।
अहिलेको संरचनाबाट नभए रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दियाको छुट्टै प्रदेश बनाएर दाङलाई राजधानी बनाउन सकिने धारणा महराले व्यक्त गरेका छन्। ‘मतदातासँगको भेटघाटका क्रममा अहिले दाङ राजधानी नभए छुट्टै प्रदेशमार्फत बन्नसक्ने सुझाव आएपछि मैले पनि त्यसबारे सोच्नथालेको छु,’ उनले भने,‘अहिले त यही अबस्थामा नै ५ नं. प्रदेशकै राजधानी बनाउन पहल हुन्छ।
कुनै कारणबश नभए पछि छुट्टै प्रदेशको विकल्पमा पनि जान सकिन्छ।’जसरी पनि दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने सवालमा यस्तो विकल्पबारे बहस गर्नसकिने विचार उनले व्यक्त गरे। ‘दाङलाई जसरी पनि प्रदेश राजधानी बनाउने हाम्रो चाहना छ।
सकभर अहिलेकै संरचनामा हुन्छ नभए अर्को प्रदेशमार्फत पनि बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने,‘दाङको सम्भावनालाई मर्न नदिन मतदाताको चाहना अनुसार अर्को प्रदेशको बहसमा जान सकिन्छ।’